बीमा गर्नलाई इच्छा भए पुग्छ : मनोजकुमार लाल कर्ण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ,युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
बीमा गर्नलाई इच्छा भए पुग्छ : मनोजकुमार लाल कर्ण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ,युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : २० माघ २०७५, आईतवार १३:०८
मनोजकुमार लाल कर्ण, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स
नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या बढेसँगै बीमाको पहुँच पनि बढ्दै गएको छ । तर, नेपालको ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । कम्पनीहरु शहरमा मात्रै केन्द्रित हुदाँ ग्रामिण भेगमा भने बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ, अहिलेको बीमाको अवस्था के छ तथा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आगामी योजना के छ भन्ने बिषयमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णसँग इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :
हालको बीमाको बजारको स्थिती कस्तो रहेको छ ?
बीमाको हालको बजार धेरै नै राम्रो रहेको छ । हाल १९ वटा कम्पनीहरु बीमा बजारमा रहेको छ । पुराना ९ वटा कम्पनीहरु रहेको छ । नयाँ १० वटा लाइसेन्स पाएका छन् । सबैले राम्रोसगँ व्यापार गरिरहेको छ । जीवन बीमाको बजार खाली नै रहेको छ । बीमा बजारमा खाली नै रहेको हुदाँ राम्रो गर्न सके व्यवसायीक हिसाबले नि राम्रो नै देखिएको छ । सम्रगमा भन्दा बीमा बजार राम्रो नै रहेको छ ।
नयाँ कम्पनीहरुले बीमा बजारलाई कस्तो सहयोग गरेको छ ?
नयाँ कम्पनीहरु आएसगै पुराना कम्पनीहरुलाई हौसला पनि भएको छ । नयाँ कम्पनी आएसगै प्रतिस्पधाको भावना पनि बढ्दै गईरहेको छ । यसको साथै हिजोको दिनमा रहेको बीमीतको सङख्या एवं पहुँच र यसको बजारमा समेत वृद्धि भएको छ । यति मात्र नभई बीमा कम्पनीहरुको सङख्या बढेसगै रोजगारीको वातावरण पनि यसले सिर्जना गरेको छ । थुपै अभिकर्ताहरुले काम गर्ने वातावरण पाएको छ । हिजोको दिनमा रहेको बीमा पहुँच र आज भएको पहुँचमा समेत परिर्वतन आएको छ । नयाँ कम्पनीहरुको बजारमा उपस्थिती रहेसँगै नयाँ क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने एवं अन्य कामहरु पनि विस्तारै राम्रो हुदै गईरहेको छ ।
बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बीमाको पहुँच १६ प्रतिशत पुगेको छ ? बीमाको पहुँच बढ्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
बीमा कम्पनीहरुको सँख्या बढेसँगै बीमा कम्पनी थपीएसँगै बीमा कम्पनीहरुमा अभिकर्ता पनी थपिएको छ । बीमा कम्पनीहरु भनेको अभिकर्तामुखी कम्पनी हो अभिकर्ता नभई बीमा कम्पनीहरु प्रत्येक कम्पनीहरुले अभिकर्ता उत्पादन गरिरहेका छन् । अभिकर्ताहरु बजारमा गईरहेको छ । बीमा सम्बन्धि जनचेतनाका लागि उनीहरु बीमीतको घरदैलोमा नै पुगीरहेका हुन्छन् । १९ वटा कम्पनीहरुले आफनो जिल्ला –जिल्लामा शाखा पनि विस्तार गरेको छ । त्यहाँ कम्पनीहरुले अभिकर्ता उत्पादन गरिरहेको छ । बीमा समिति पनि केही बर्षयता तिव्र रुपमा अघि बढीरहेको छ । समितिले पनि जनचेतना लगायत अन्य कामको लागि निकै जोडजाडका साथ लागिरहेको छ । कम्पनीले आफनो तर्फबाट काम गरिहरहेको छ भने बीमा समिति आफनो क्षेत्रबाट लागि रहेको हुदाँ यसको पहुँचमा वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीको चालु आवको प्रथम र दोस्रो त्रैमासको अवस्था रहयो ?
पहिले त्रैमासको वित्तिय विवरण भन्दा हाम्रो दोस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण निकै राम्रो भएको छ । हामीले दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ६ करोडको हाराहारी प्रथम बीमा शूल्क आर्जन गरिसकेका छौ । जुन आफैमा ठूलो कुरा हो ।
कम्पनीले आईपीओ कहिलेसम्म जारी गर्दैछ ?
हामी नयाँ कम्पनीहरुको हकमा २ अर्ब पुराउनु नै पर्छ भन्ने परिधि चाहि रहेको हुदैन । हामीले अहिले नै एकीनका साथ भन्न सक्दैनौ । हामीले धितोपत्र बोर्डमा पठाउने शिलशिलामा छौ । हामीले इस्यू म्यानेजर पनि नियुक्ती गरि सकेको छौ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा हामीले कारोबार गरिसकेका छौ । नियम अनुसार नै हामी आईपीओ ल्याउने छौ ।
नयाँ कम्पनीमध्ये युनियन लाईफको वित्तिय अवस्था राम्रो देखिएको छ । यसको कारण के हो ?
हाम्रो एउटा टिम वर्कको कारणले गर्दा कम्पनीको प्रस्तुती राम्रो भएको हो । हाम्रो टिमले बजारमा कसरी जान सकिन्छ र कसरी जाँदा प्रभाकारी हुन सक्छ त ? भन्ने बिषयमा हामी आफै काम गरिरहेका हुन्छौ । यसका साथै हामीले कर्मचारी एवं अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिईरहेका हुन्छौ ।
नयाँ बीमा विद्येयकमा एउटा अभिकर्ताले एउटै कम्पनीमा काम गनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बीमा अभिकर्ताहरुले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस बिषयमा तपाईको भनाई के भन्नुहुन्छ ?
यस बिषयमा मलाई त्यत्ति धेरै जानकारी छैन । तर मेरो विचारमा बीमा कम्पनीको नियम रहेको छ भन्ने पक्कै पनि त्यसै अनुसार नै चल्नु नै पर्छ । नयाँ बीमा विधेयक पनि आउदैछ । ऐनलाई त अनुसरण गर्नु नै पर्छ । तर मेरो विचार अनुसार एउटा अभिकर्ताले एउटै मात्र कम्पनीमा मात्र नभई अन्य कम्पनीहरुमा पनि काम गर्न पाउनुपर्छ ।
बजारमा नक्कली पोलिसीहरु आईरहेको छ ? बीमीतहरु यसबाट कसरी सजग हुने त ?
कसैले नियतबस कुनै कम्पनीको नाममा नक्क्ली पोलिसीहरु बनाएको छ भने त्यो गलत हो । अहिले बैदेशिक रोजगार बीमामा यस्तो समस्या देखिएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा भने यसको समस्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर बीमीत पनि यो कुरामा आफै सजग रहन जरुरी रहेको हुन्छ । कुन कम्पनी मार्फत बीमा गर्दैछु । बीमीतले पोलिसी नम्बरहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई जथाभावी विदेशी भ्रमण गराए भनेर बीमा समितिले भ्रमणमा रोक लगाएका छ नि ? के कम्पनीले जथाभावी घुमाउँने गर्छन् त ?
यो निति पक्कै पनि राम्रो नै हो । विदेशमा अभिकर्ताहरुलाई भम्रणमा पठाउनु हुदैन । बाहिर लगेर कम्पनीको याव्त खर्च रोक्नको लागि चालेको यो एउटा राम्रो नै कदम हो । कम्पनी जथाभावी घुमाउँने त गरेको छैन । तर पनि यो कदम राम्रो नै हो ।
बीमा प्रती आम जनमानसको धारण कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
बीमा गरयो भने आर्थिक सुरक्षा हुन्छ । भोलिको दिनमा सुरक्षित हुनुको साथै यो एउटा अनिश्चित जोखिमको साथी पनि हो भनेर अधिंकाश मानिसहरुले यसको बारेमा थाहा पाईसक्नु भएको छ । त्यसैले हिजोको दिनमा भन्दा आजको दिनमा बीमा गराउनेको सङख्या पनि बढीरहेको छ ।
बीमा क्षेत्रको चुनौतीहरु के–के हुन् ?
मेरो विचारमा हालको स्थितीमा जीवन बीमाको हकमा त्यस्तो चुनौतीहरु रहेको छैन । कम्पनीहरुले आ–आफनो क्षेत्रबाट राम्रो व्यवसाय पनि गरिरहेको छ । बीमा बजार लगभग पूरै नै खाली छ । जती लिन सकिन्छ । व्यवसायको वातावरण निकै राम्रो रहेको छ । अझै तिन/चार बर्षसम्ममा यसमा खासै चुनौतीहरु आउदैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
समितीले तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ ? बजारमा रहेको दक्ष जनशक्तिलाई परिपूती गर्ने काम गर्छ त ?
यसले पक्कै पनि भोलिको दिनमा बीमा बजारमा रहको दक्ष जनशक्तिको अभावलाई परिपूति गर्ने काम गर्दछ । बीमा बजार बढेसँगै दक्ष जनशक्तिको आवश्यक पनि हुदै गईरहेको छ । बीमा समिति ल्याएको तालिम केन्द««ले भावी दिनमा पक्कै पनि निकै राम्रो हुने अपेक्षा सबैको यसमा रहेको छ ।
बजारमा एउटै किसीमको पोलिसीहरु नै छन् ? केही नयाँ खालको नभएको गुनासो पनि नि त ?
सम्रग बीमाको स्थिति हेर्ने हो भने बीमा सबैले गरेको छैन । यहाँ बीमा १४ प्रतिशत पुगेको छ भनेता पनि तर त्यत्तिको हाराहारीमा पुगीसकेको छैन । आखिर बीमा त त्यहि नै हो । त्यसलाई काटँछाट गरे नयाँ पोलिसी बनाउने नै हो । बीमा गर्ने भए त पूरानै बीमा पोलिसी नै ठिक हुन्छ नी । यदि उसले पूरानो बीमा गरेको छ भने पो त नयाँ बीमा उसले लागि उत्साहजनक हुन्छ । त्यही भएको पूरानो पोलिसी नै काफी छ । यदि बीमा गर्ने हो भने पनि पूरा बीमा गर्नेको सङख्या निकै कम छ ।
प्रविधिको प्रयोग मार्फत ग्राहकहरुलाई सुविधा दिने केही व्यवस्था गर्नुभएको छ वा छैन ?
हामीले डिजिलाइजेशन अनुसार जाने काममा भईरहेका छौ । यदि कसैले बीमा पोलिसीहरुको बारेमा जानकारी लिन कम्पनीको वेवसाईटबाटै हेर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि त केही समय लाग्छ । तर भोलिको दिनमा ग्राहकहरुको सुविधाको मध्यनजर गरेर हामीले पनि यस्ता सुविधा ल्याउन सक्छौ । तर यो कुनै ठूलो कुरा भने हैन ।
सरकारले कस्तो निति ल्याउँदा बीमा बजार अझै अघि बढ्न सक्छ ?
सरकारले २५ हजारसम्म दिएको कर सम्बन्धि छुट दिएको छ त्यसलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जस–जसको बढी कर छुट भईरहेको छ । उनीहरु बीमा प्रति अझ केही आर्कषण हुने देखिन्छ ।
बीमा चेतना वृद्धिको लागि के गनुपर्छ ?
बीमा सम्बन्धि चेतनाको लागि प्राथमिक तह देखि नै बीमाको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ । बीमा सम्बन्धि जानकारी प्राथमिक तहदेखि नै भयो भने यसको चेतनामा वृद्धि हुन सहयोग गर्दछ । पाठ्यक्रममा नै यसलाई समावेश गरिदा यसको चेतनामा पक्कै पनि वृद्धि हुन्छ । बीमा सम्बन्धि जागरणले मात्र भन्दा पनि यसलाई ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
‘यदि ईच्छा छ भने बीमा सबैले गर्न सक्छ । दैनिक रुपमा चिया, चुरोट, खैनी खाने पैसा जोगाएर बीमा गर्न सकिन्छ । ती सबै खर्च जोगाएर ईच्छा भयो भने बीमा गर्न सकिन्छ ।’
बीमा धनीको लागि मात्र हो भनिन्छ नी ?
बीमा सबैले गर्ने सकिन्छ । यदि ईच्छा छ भने बीमा सबैले गर्न सक्छ । लगभग निम्न आय भएको व्यक्तिले बीमा गर्न सकिन्छ । दैनिक रुपमा चिया, चुरोट, खैनी खाने पैसा जोगाएर बीमा गर्न सकिन्छ । ती सबै खर्च जोगाएर ईच्छा भयो भने बीमा गर्न सकिन्छ । आजको युगमा पनि पैसा छैन भन्ने नै हुदैन । मेरो विचारमा बीमा धनीको लागि मात्र अरुले गर्न सकिदैन भन्ने चाहि हुदैन । कुनै लेबरको लागि काम गर्न खोज्न गर्यो भने पाउदैन । कसरी हामी भन्न सक्छौ कि खर्च नभएर बीमा नगरेको हो भनेर एकीनका साथ त्यही बाट पनि पुष्टि हुन सक्छ ।
कम्पनीको आगामी रणनितिहरु के–के छन् ?
हामीले आगामी दिनमा कर्मचारी थप्ने, शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ नयाँ बीमा योजना ल्याउने योजना बनाएका छौ । नयाँ–नयाँ शाखा खोले बीमा व्यवसाय भित्राउँन सहज हुन्छ । त्यसैले हामी त्यसमा लागि रहेका छौ ।
अप्पर सोलु हाइड्रोले आजबाट आइपीओ निष्काशन गर्दै, कति कित्तासम्म दिन पाईन्छ आवेदन ?
पूँजी बृद्धि र मर्जरको प्रस्ताव सहित सिटिजन लाइफले डाक्यो विशेष साधारणसभा
सानिमा लाइफको साधारणसभा आज , लाभांश र मर्जर प्रस्ताव पारित गर्ने
११ महिनामा कुन जीवन बीमा कम्पनी नयाँ व्यापार ल्याउनमा तगडा ? (इन्फोग्राफ सहित)
अभिकर्ता संघको तेस्रो अधिबेशनबाट अध्यक्षमा अधिकारी र आचार्य निर्बाचित कसले पाउँला आधिकारिकता ?